Football Khabar » बस्ने वा जाने निर्णय मेस्सीकै हातमा : बार्सिलोना उपाध्यक्ष
बस्ने वा जाने निर्णय मेस्सीकै हातमा : बार्सिलोना उपाध्यक्ष
एजेन्सी, भदौ २५
जारी सिजन सकिएपछि स्पेनिस बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सीले क्लब छाड्न सक्ने चर्चा एककासि बढेको छ । क्लबका अधक्ष, अन्य अधिकारी र बार्सिलोनाकै सिनियर खेलाडी स्वयंले यस विषयमा पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेर मेस्सी कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जनाउ दिएका छन् ।
मेस्सीले बार्सिलोनामा लगातार ठूला उपाधि जित्न नसक्नु र बढ्दो उमेरका कारण आफ्नो औचित्व र आवश्यकता कम हुँदै गएको निचोडसाथ स्वविवेकले क्लब छाड्न चाहेको चर्चा छ । मेस्सी र बार्सिलोनाबीच सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्झौता हुँदा मेस्सीले हरेक सिजनको अन्त्यसँगै मेस्सीले चाहे आफूखुसी फ्रिमा क्लब छाड्न सक्ने सर्त छ ।
मेस्सीको करिअरको विषयमा बार्सिलोनाका उपाध्यक्ष जोर्डी कार्डोनेरले पनि ‘मार्सा’सँग कुरा गर्दै धारणा राखेका छन् । उनले क्लब अब मेस्सीलाई बार्सिलोनामै राख्न दबाब नदिने र मेस्सीले आफ्नो भविष्यको निर्णय स्वविवेकले आफैं लिन सक्ने बताए ।
‘मेस्सीबारे हामी एकदमै शान्त छौं । हामीलाई लाग्छ, हाम्रो डे«ेसिङ रुमै अझै पनि मेस्सी र मेस्सीको भविष्यलाई लिएर सकारात्मक छ,’ कार्डोनेरले भने ।
उनले अघि थपे, ‘हामी यसमा प्रष्ट छौं– लियोलाई जे ठीक लाग्छ, त्यही गर्न सक्छन् । तर, उनीसँग हाम्रो खास सम्झौता छ । किनभने, उनी भनेका उनी नै हुन् ।’
कार्डोनेर मेस्सी अझै क्लबमा बसिदिए विश्वका करोडौं समथर्कहरू खुसी रहने बताए । ‘यदि मेस्सीले अर्को वर्ष क्लब छाडेनन् भने त्यो उनका करोडौं समथर्कहरूका लागि खुसीको कुरा हुनेछ,’ कार्डोनेरले भने ।
प्रकाशित मिति २५ भाद्र २०७६, बुधबार १०:००
अत्यधिक भोटसहित रोनाल्डो ‘प्लेयर अफ् द सिजन’ घोषित !
फ्यानका नाममा पत्र लेख्दै रोनाल्डोले भने– ‘हामी झन् बलियो भएर आउनेछौं र जित्नेछौं’
के ‘टुटेका’ रोनाल्डोले साँच्चै युभेन्टस छाड्दैछन् ?
युभेन्टसका नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्डोका ‘बिग फ्यान’ !
च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएपछि रोनाल्डोकी दिदी युभेन्टसका खेलाडीमाथि फायर !
च्याम्पियन्स लिग : क्वार्टरफाइनल चरणका खेलबारे सम्पूर्ण जानकारी
चेल्सीको पोस्टमा ‘गोलको वर्षा’ गर्दै बार्यन च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा
लिजेन्ड खेलाडी पिर्लो युभेन्टसको नयाँ प्रशिक्षकमा नियुक्त
रोनाल्डो युभेन्टसका पिलर हुन्, उनी यहीं रहनेछन् : क्लब अध्यक्ष
च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएको २४ घन्टा नबित्दै युभेन्टसका प्रशिक्षक बर्खास्त !